Seth Godin ငါနှင့်အတူသဘောတူ! | Martech Zone
Seth Godin ငါနှင့်အတူသဘောတူ!
အိုကေ, သူပုဂ္ဂိုလ်ရေးအရမပြောခဲ့ပါဘူး, ဒါပေမယ့် ရှေ Godin ရဲ့ ငါ၏အခေါင်းစဉ်မှစကားများ volumes ကိုမပြောတတ် စီးပွားရေးနှင့်လူမှုရေးမီဒီယာစျေးကွက်ရှာဖွေရေးမဟာဗျူဟာများမှားသွားခဲ့သည်.
Tags: ကာတွန်း gifအီးမေးလ်ကာတွန်းစေတီပုထိုးများစာအရေးအသား
သင်ဟာ Startup တစ်ခုအတွက်အလုပ်လုပ်ချင်ပါသလား။